သငျ့လြျောကောငျးမှနျသောအလုပျအကိုငျ ဌာနအေစီအစဉျ ၂၀၁၈ - ၂၀၂၁
Myanmar Decent work Country Programme 2018-2021
The Decent Work Country Programme sets out ILO’s programme priorities for Myanmar for the period 2018-2021.
Myanmar Decent Work Diagnostic Report
The Decent Work Country Diagnostic provides an overview of labour market trends and challenges in achieving the goal of Decent Work for All in Myanmar. It also reflects the progress Myanmar has made in economic development, labour market governance and social dialogue.
The Impact of Trade on Employment in Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုပ်သမား ကူညီပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့များအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်။
ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် အိမ်အကူ အလုပ်သမားများ အားလုံးအတွက် သင့်တော်ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ILO မဟာဗျူဟာများထဲမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် ။ လမ်းညွန်စာအုပ်တွင် ကူညီပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့များအတွက် အိမ်အကူအလုပ်သမားများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ၊ အိမ်အကူအလုပ်သမားများအနေဖြင့် ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် စုပေါင်းသင်းဖွဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ လက်တွေ့နည်းလမ်း များကို ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်သားရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒဆက်စပ်ကိုက်ညီမှုကို တည်ဆောက်ခြင်း။
ဤစာတမ်းတွင် နိုင်ငံတကာသို့ လုပ်သားရွှေ့ပြောင်း သွားလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီမံအုပ်ချုပ် ဆောင်ရွက်မှုအား ခြုံငုံသုံးသပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ပြည်ထောင်စု/အမျိုးသားအဆင့်တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေသူများ၊ မူဝါဒများနှင့် လက်ရှိတွင် အတူတကွ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၁၈၉)။
အိမ်အကူအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၁၈၉)သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အိမ်အကူအလုပ်သည် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် အိမ်အကူ အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
မြန်မာ့အလုပ်သမားဥပဒေ - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (အလုပ်ရှင်များအတွက်) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ
မြန်မာ့အလုပ်သမားဥပဒေကို သိရှိနားလည်ရန်မှာ လွယ်ကူသောတာဝန်တစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော အလုပ်ရှင်များက ၎င်းတို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏အလုပ်သမားဥပ ဒေများကို လေးစားလိုက်နာခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ထင်မြင်ယူဆ ကြောင်း အိုင်အယ်(လ်)အိုသို့ မကြာခဏမေးလေ့ရှိပါသည်။ အချိန်ပိုလုပ်အားခတွက်ချက်ခြင်းမှအစ၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ (သို့) ဥပဒေကြောင်းအရ၊ တရားဝင်အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ် ကိုင်နိုင်သော အငယ်ဆုံးအသက်အရွယ်အထိ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
မြန်မာ့အလုပ်သမားဥပဒေ - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (အလုပ်သမားများအတွက်)
မြန်မာ့အလုပ်သမားဥပဒေကိုသိရှိနားလည်ရန်မှာ လွယ်ကူသောတာဝန်တစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာအ လုပ်သမားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများအကြောင်းနှင့် ယင်းအခွင့်အရေးများချိုးဖောက်ခံရ သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသည့်အချိန်များတွင် မည့်သူ့ထံသို့တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို အိုင်အယ်(လ်)အို သို့မကြာခဏမေးလေ့ရှိပါသည်။ အိုင်အယ်(လ်)အိုအနေဖြင့် မကြခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကို စုစည်းလျက်လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ကာ၊ ယေဘုယျ လမ်းညွှန်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Understanding the Myanmar Labour Law: FAQs for employers
Understanding labour laws may not be an easy task. Employers doing business in Myanmar often ask the ILO whether they are complying with Myanmar's labour laws. Inquiries range from the calculation of overtime to minimum wage, or legal employment age. The ILO has collected some of the most frequently asked questions received, and seeks to provide general guidance.
Understanding the Myanmar Labour Law: FAQs for workers
Understanding labour laws may not be an easy task. Myanmar workers often ask the ILO about their rights at work, or where and to whom to present their grievances to when they think those rights have been broken. The ILO has collected some of the most frequently asked questions received, and seeks to provide general guidance.